HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSharraxaadda Kiiska Shilka ee BT Ankara YHT
14 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Sharraxaadda kiiska shilka ee ankara yht
Shaqada United ee Shaqaalaha Gaadiidka (BTS) shalay, tijaabadii ugu horeysay ee shilka tareenka xawaaraha sare ayaa shaaca ka qaaday masuuliyada dhabta ah ee halganka lagu doonayo in lagu muujiyo runta.
Qoraalka qoraalka ah ee ay sameeyeen BTS waa sida soo socota; 13. Tareenka Xawaaraha Sare ee isla isku midka ah ee tareenka Ankara-Konya wuxuu ku dhacay 2018-kii Disember 3 Shilkii ka dhacay Ankara-Marsandiz, 9 ka mid ah 92 ayaa ku dhintey halka 1 ay ku dhaawacmeen shilka tareenka (13 Janaayo 2020) Waxaa lagu arkay Ankara 30th Court Penal High shalay shalay.
Xukunka ay maxkamaddu diyaarisay, dhimashada iyo dhaawaca in kabadan hal qof 'oo ah eedeymo ah in lagu xukumay xabsi illaa 15 sano ah, sedexda eedeysane ayaa ka qeyb qaatay dhageysiga dhageysiga guud ee 10 eedeysane.
Kadib dhageysiga aqoonsiga eedeysanayaasha iyo dadka dacwoonaya, dhageysiga wuxuu ku bilaabmay hadalada ay bixiyeen eedeysanayaasha iyo maxkamada iyo su’aalaha qareenada ilaa saacadihii dambe.
Xaaladda hadda jirta, bayaanadii iyo bayaanadii laga soo gudbiyay Sarkaalka Ururka Tababarka iyo mashiinnada ku naf waayey shilka, Maareeyaha Guud ee TCDD iyo Kaaliyaha Maareeyeyaasha Guud waxaa laga codsaday in la maxkamadeeyo iyada oo aan wax cadaalad ah oo dhab ah la helin.
Dhamaadka dhageysiga, maxkamaddu waxay go’aansatay inay sii waddo xiritaanka Sarkaalka Ururka Tareenka Cusmaan Yildirim waxayna dhegeysiga dib u dhigtay 24-ka Janaayo 2020 waxayna go’aansatay siideynta Sinan Yavuz iyo Kontroolka Taraafikada Emin Ercan Erbey.
Marka ugu horeysa, waa in la ogaadaa in ay jirto nidaam aan saxeexin oo sababa shilkan. Si kale haddii loo dhigo, shil la mid ah ayaa suurogal ah wakhti kasta. Waxaa xaqiijiyay Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka ee Turkiga (TCDD) in meesha laga baxo iyo xilliyada adeegyada tareenka la beddelo shilka ka dib.
Waxa shilal badan ka dhacay jidkeena tareenka illaa iyo hadda, boqolaal muwaadiniin ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay shilalkaas.
Waxaan nahay sababta dhabta ah ee shilalkaan markasta; Muddada AKP oo ay kujiraan howlihii laga hirgaliyay ilaa 2003 magaca dib-u-habeynta ee TCDD, kana baxsan khaladaadka shaqsiyadeed ee shaqaalaha; siyaasiyiinta iyo shaqaalaha xafiisyadu waxay qaadayaan tillaabooyin saynis ah, shaqaalaha aan mudnayn inay u yimaadaan inay shaqeeyaan, tiro aan tiro yarayn oo shaqaale ah, in kabadan hal koob oo hal koob iyo wixii la mid ah.
Sababahan ayaa si faahfaahsan loogu sharxay warbixinta ka diyaarisay shilka kadib shirarka ururkayaga mowduuca iyo warbixintayada; - Waa iska cadahay culayska siyaasadeed ee hay'addu ka leedahay inuu furo khadad aan dhammeystirnayn sabab la xiriirta bandhig siyaasadeed ayaa ah mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee sababta xafiisyada sare ay u aamusaan oo ay u faraan maamulayaasha hoos taga inay soo saaraan amaradaan la yaabka leh, halkii ay ka hor istaagi lahaayeen cadaadiska ay ku hayaan hay'adda. Waxaa la sheegay halka ay tahay in mas'uuliyadda ugu weyn laga raadsado.
Annaga noo eeg, mas'uuliyadda dhabta ah ee shilkan waa mid muuqata. Nasiib darrose, mar labaad waxaan aragnaa in dadka masuulka ah ee dhabta ah aan la keenin garsoorka shilkaan kadib.
Waa in la ogaadaa in dacwad ku qaadista damiirka dadwaynaha aan si buuxda loo hubin doonin kahor inta aan la gaarin go'aanka furitaanka khadka kahor intaan la dhammeystirin nidaamka saxeexyada garsoorka hortiisa.
Waa inay ogaataa dhammaan dadkeenna inaan sii wadi doonno halganka aan ku go’aamineyno inaan shaaca ka qaadno mas'uuliyadaha dhabta ah ee shilkan.
ka BTS ah Çerkezköy War saxaafadeed ka soo baxay Saldhigga Tareenka
BTS iyo TMMOB waxay soo saareen war-saxaafadeed si wadajir ah oo ku saabsan Mashruuca Masiibada Ankara
BTS'dan TCDD ka dib markii shil shaqo lagu sameeyey su'aal 5!
Sharraxaadda Elvankent YHT Shilalka laga soo bilaabo TCDD
Xubnaha BTS ee ka socda Ankara ilaa Balikesir waxay u yimaadeen Afyonkarahisar
BTS Soo wac si aad u aqbalidoonto boosteejada Ankara!
Xaaladda Shilka Yaanuug